कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज मंसिर १५ गते आइतवारको राशिफल ! - ramechhapkhabar.com
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज मंसिर १५ गते आइतवारको राशिफल !
भाग्य तथा समयले साथ दिने हुदा सानो प्रयत्नले उपलब्धिमुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक स्थिति बलियो हुनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट तपाईले शुरु गरेको कामलाई सहयोग हुँनेछ भने पैत्रिक धन सम्पतिको प्रयोग मार्फत मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ। पुराना साथिभाई सँग भेटघाट गरि रमाईलो ठाउँमा स्वादिष्ट परिकारका साथ रम्न सकिनेछ ।